ဓာတ်မတည့်မှုများသည်အလုပ်လုပ်ပါသလား။ သူတို့ထိုက်တန်လား။ - ကျန်းမာရေးပညာရေး | ဇန္နဝါရီလ 2022
သတင်း၊ ကုန်ပစ္စည်း ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ကုမ္ပဏီ မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း ရပ်ရွာ သတင်း ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် ကုမ္ပဏီ, ကျန်းမာရေးပညာရေး ကုမ္ပဏီသတင်း ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးပညာရေး ဖျော်ဖြေရေး ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက် ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ
အဓိက >> ကျန်းမာရေးပညာရေး >> ဓာတ်မတည့်မှုများသည်အလုပ်လုပ်ပါသလား။ သူတို့ထိုက်တန်လား။
နှာရည်ယိုခြင်း? စစ်ဆေးပါ။ ယားယံပြီးကြဲကြဲမျက်လုံးများ? စစ်ဆေးပါ။ အဆက်မပြတ်နှာချေ? စစ်ဆေးပါ။ စစ်ဆေးပါ။ ရာသီအလိုက် (သို့) တစ်နှစ်ပတ်လုံး - ဓါတ်မတည့်မှုကြောင့်ခံစားရသောလူများသည်ပုံမှန်ပုံမှန်ဖြစ်သည် ဓာတ်မတည်ဆေး , နှင့်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများမရရှိသေးပါကပိုမိုကောင်းမွန်သောဓာတ်မတည့်မှုဟုခေါ်သော allergen immunotherapy ကိုကြည့်ရှုရန်လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။ ဓာတ်မတည့်မှုများသည်အလုပ်လုပ်ပါသလား။ ဓာတ်မတည့်မှုများသည်ထိုက်တန်ပါသလား။ သင့်ရဲ့တစ်ရှူးတွေကိုဆက်ပြီးစာဖတ်နေပါ။
လူ ဦး ရေသန်း ၄၀၀ ခန့်သည်တစ်ကမ္ဘာလုံး၌ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်ပွားခြင်းနှင့်အတူနေထိုင်ကြသည် ကမ္ဘာ့ဓာတ်မတည်အဖွဲ့အစည်း ။ ၎င်းတို့သည်ဝတ်မှုန်၊ မှို၊ မြက်၊ မြေမှုန့်၊ ဖုန်မှုန့်ကော်များ၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် dander နှင့်အခြားအဖြစ်များသည့်ဓါတ်မတည့်မှုများနှင့်ထိတွေ့မိလျှင်နှာချေခြင်း၊ နှာရည်ယိုခြင်း၊ ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ မျက်စိကြွေခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ လည်ချောင်းသို့မဟုတ်အရေပြား။ ဓာတ်မတည့်မှုများသည်လူများအားအထူးသဖြင့်မကြာခဏဆိုလျှင်စိတ်ဆင်းရဲစရာဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဓါတ်မတည့်ခြင်း၊ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါနှင့်ရောဂါပြီးပညာအကယ်ဒမီ ဓာတ်မတည့်မှုများကိုတာရှည်သောကုသမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးမတည့် rhinitis (hay fever)၊ မတည့်သောပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ၊ မျက်စိ (allergies) နှင့် stinging insect allergy ၏လက္ခဏာများကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ပုံမှန်ရေရှည်အနည်းငယ်ဓါတ်မတည့်သည့်ဆေးများ (လူများနှင့်မတည့်သောအရာများ) ဖြင့်ရိုက်ချက်များသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှထိခိုက်လွယ်မှုကိုလျော့နည်းစေပြီးရောဂါလက္ခဏာများကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်။
Promethazine , diphenhydramine (Benadryl တွင်ပါဝင်သောအရာ) နှင့် ဟိုက်ဒရောဆိုဒ် ဓာတ်မတည့ရိုက်ချက်များဥပမာအချို့ကိုဖြစ်ကြသည်။
ဓာတ်မတည့်သည့်ရောဂါများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီသောလူစုအုပ်စုသုံးစုရှိသည်။အရ Sima Patel က DO နယူးယောက်ရှိဓာတ်မတည့်ခြင်းနှင့်နယူးယောက်မြို့ရှိဆင်နပ်စင်တာတွင်
တစ်နှစ်ပတ်လုံးထိခိုက်နစ်နာမှုများ , ဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောရာသီ၌တည်၏
အခြားကုသမှုများမှသက်သာရာမရသောသူများ။ အကယ်၍ ဆေးဝါးများ လူများသည်ရိုက်ချက်များနှင့်ကုသမှုစတင်ရန်ညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ဟုဒေါက်တာ Patel ကရှင်းပြသည်။
အမြဲတမ်းကယ်ဆယ်လိုသောသူများ၊ ဥပမာသင်သည်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်မတည့်ပါက ။ ဓါတ်မတည့်ဆေးများသည်ဓာတ်မတည့်မှုခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်းတုံ့ပြန်မှုကိုမကုသနိုင်ပါ။
သင်ရည်ညွှန်းသည့်လေ့လာမှုအပေါ် မူတည်၍ ဓာတ်မတည့်ခြင်းများသည်လူနာ ၈၅% အထိရောဂါလက္ခဏာများကိုတိုးတက်စေနိုင်ကြောင်းဒေါက်တာ Patel ကပြောကြားခဲ့သည်။
ဓါတ်မတည့်ခြင်းကုသမှုများသည်ရုံးအတွင်းရှိဓာတ်မတည့်သူသို့မဟုတ်ကာကွယ်ဆေးပညာရှင်မှစီမံသောဆေးညွှန်းကုသမှုဖြစ်သည်။ ရုံးလည်ပတ်မှုတစ်ခုစီအတွက်အခကြေးငွေတောင်းရန်လိုအပ်သော်လည်းများသောအားဖြင့်၎င်းတို့သည်အာမခံထားမှုအများစုဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားသည်။ ရေရှည်တွင်ဆေးထိုးရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်နေ့စဉ်ဆေးသောက်ခြင်းထက်လျော့နည်းနိုင်သည်။
တစ်စုံတစ် ဦး ၌ရှိသည့်ဓာတ်မတည့်မှုပမာဏပေါ် မူတည်၍ ဖလားတစ်ခုစီတွင်မည်သည့်ဓာတ်မတည့်နိုင်သည့်ပမာဏပေါ် မူတည်၍ တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်မှလေးကြိမ်ရိုက်ရမည်။ ၎င်းသည်အလွန်သေးငယ်သောအပ်ကဲ့သို့၎င်းသည်ကာကွယ်ဆေးကဲ့သို့တူညီသောရိုက်ချက်မဟုတ်သည့် 'ကလေးရိုက်ချက်များ' ဖြစ်သည်ဟုဒေါက်တာ Patel ကပြောကြားသည်။
အကယ်၍ လူတို့တွင်များစွာသောမှုန်မှုန်များ - ဝတ်မှုန်၊ ဖုန်မှုန့်၊ တိရိစ္ဆာန်များမှို၊ မှိုများနှင့်အခြားသူများရှိပါက၎င်းတို့သည်မတူညီသောဖလားလေးခု (ရိုက်ချက်များ) ကိုကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖုန်မှုန့်ဓာတ်မတည့်မှုသို့မဟုတ်တိရစ္ဆာန်ဓာတ်မတည့်မှုသာရှိသူများအတွက်ဖလားတစ်လုံးသာလိုအပ်သည်။ ကုသမှုအဆင့်နှစ်ဆင့်ရှိသည်။
တည်ဆောက်မှုအဆင့် - လူနာများသည်တည်ဆောက်ပုံအဆင့်အတွင်းဆရာ ၀ န်၏ရုံးခန်းတွင်အပတ်စဉ်ရိုက်ချက်များကိုရကြသည်။ ဤကာလအတွင်းသုံးလမှ ၆ လအတွင်းဆေးထိုးခြင်းကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးမြှင့်သည်။
တစ်စုံတစ် ဦး ကသူတို့၏အပတ်စဉ်ရိုက်ချက်ကိုလက်ခံရရှိသည်နှင့်အမျှ၎င်းတို့သည် anaphylaxis ဟုခေါ်သောလေးနက်သောတုန့်ပြန်မှုမရှိစေရန်ဆရာဝန်၏ရုံးခန်းတွင်မိနစ် ၃၀ နေရမည်။ အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်းသို့မဟုတ်သွေးပေါင်ချိန်ကျခြင်းတို့ပါဝင်နိုင်ပြီး၎င်းသည်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ရှားပါးသော်လည်း၊ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းတုန့်ပြန်မှုသည်ပထမဆုံးဓာတ်မတည့်ရိုက်ချက်ဖြစ်စေ၊ ဆေးထိုးပြီးနောက်တိုင်းနာရီဝက်ခန့်စောင့်ရမည်။ ဆေးထိုးသည့်နေရာ၌နာကျင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဓာတ်မတည့်ခြင်းလက္ခဏာများကဲ့သို့နူးညံ့သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ပြီးနောက်၊ ထိုရိုက်ချက်တွင်တစ်စုံတစ် ဦး မှမတည့်သည့်ဓါတ်မတည့်မှုများပါရှိသည်။
Sublingual immunotherapy (SLIT) လို့ခေါ်တဲ့ဓါတ်မတည့်ဆေးပြားတွေ၊ ထိုးတာတွေဟာ immunotherapy ရဲ့နောက်ပုံစံအသစ်တစ်ခုပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့လျှာအောက်မှာတိကျသောဓာတ်မတည့်မှုနှင့်အတူတက်ဘလက်သို့မဟုတ်အရည်ကျဆင်းခြင်းပါဝင်သည်။ ဤရွေ့ကားရိုက်ချက်များကဲ့သို့ထိရောက်သောဖြစ်ကြပြီးသင်သည်သင်၏မတည့်သူထံမှသူတို့ကိုလက်ခံရရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်အိမ်၌ပင်ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်သည်။ သင်သည်အပ်များကိုမကြောက်လျှင်အပတ်စဉ်ချိန်းဆိုမှုများပြုလုပ်ရန်မတတ်နိုင်ပါက၎င်းတို့သည်ရွေးချယ်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
သို့သော်၊ တစ်ခုချင်းစီတွင်တစ်ခုစီသည်မတည့်မှုတစ်ခုသာပေးသည်။၎င်းသည်သစ်ပင် ၀ တ်မှုန်ကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ရန်မရရှိနိုင်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်မြက်၊ ragweed နှင့်ဖုန်မှုန့်ဓာတ်မတည့်ခြင်းများအတွက်ကုသမှုနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဒေါက်တာ Gupta ကပြောသည်။
အချို့သော SLIT အမှတ်တံဆိပ်များတွင်ပါ ၀ င်သည် Odactra , နင် , Oralair နှင့် Ragwitek ။
အချို့လူများက၎င်းတို့သည်အချိန်ပေးရန်လိုအပ်သောကြောင့်ဓာတ်မတည့်မှုများစတင်ရန်တွန့်ဆုတ်နေကြသည်။ဓာတ်မတည့်သည့်ရောဂါများကိုသုံးနှစ်မှငါးနှစ်ခန့်ကြာမြင့်ပြီးကုသမှုပြီးဆုံးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာသင်၏ဓာတ်မတည့်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုဆိုသည် Ratika Gupta, MD နယူးယောက်၊ ဘရွတ်ကလင်းမှ ENT မှဓါတ်မတည့်သူနှင့်ဓာတ်မတည့်သည့်အသင်းအဖွဲ့များ။ သို့သော်ရောဂါလက္ခဏာများအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြန်လာနိုင်ပါတယ်။
ဓာတ်မတည့်သူများကရောဂါလက္ခဏာများပေါ်မူတည်ပြီးလူနာများအားမည်သည့်အချိန်တွင်ရိုက်ချက်များကိုရပ်နိုင်ကြောင်းဆုံးဖြတ်သည် သုံးနှစ်တွင်တစ်စုံတစ် ဦး သည်ပုံမှန်ဆေးများကိုပျောက်ဆုံးနေသောဆေးများမရရှိဘဲသူတို့တွင်လက္ခဏာများမရှိတော့ပါက၎င်းတိုသည်ရပ်တန့်နိုင်သည်။ သို့သော်ပုံမှန်အားဖြင့်လူများသည်အနည်းငယ်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောရောဂါလက္ခဏာများရှိနေဆဲဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်ငါးနှစ်ပြည့်ရန်ဆက်လက်လိုအပ်သည်။ ဟုတ်ကဲ့, ထိုရှည်လျားပေမယ့်အချို့သောအဘို့အလစာ - ချွတ်ဘဝ - ပြောင်းလဲနေတဲ့နိုင်ပါတယ်။ လူအများစုကသူတို့၏ဘ ၀ အရည်အသွေးကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်ထိုက်တန်သောဓာတ်မတည့်ဆေးများကိုရှာကြသည်။
Concerta vs Vyvanse: အဓိကကွာခြားချက်များနှင့်တူညီချက်များ
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကာလအတွင်းသင့်ဆရာဝန်အားမေးရန်မေးခွန်း ၁၀ ခု